Obhinqileyo Threaded ezimnyama anodised Standoff Round Aluminium Standoff M3 Spacer
Umgangatho olungileyo kunye nexabiso le-M3 i-Anodised Thread Round Aluminium Standoff
umbala omnyama M3 ujikeleze i-aluminium anodised standoff / spacer
IAlodum Alacum Spacer M3 Isithuba sokuma komhlaba
Umzekelo isampulu yasimahla eyakhelweyo ngokuchanekileyo ye-m3 m4 aluminium anodised standoff spacer
Isicwangcisi esenziwe ngobuqhetseba seAluminiyam ezimnyama zeAnodum
Ivenkile yamanqanaba e-aluminium ejikeleziweyo
I-M2 M3 M4 M5 isiko elijijekileyo kunye ne-aluminium spacer ekumile
M3 / M4 / M5 Ukuma kweAluminiyamu kumjikelo / kumjikelo weAluminiyam yealuminium
Iintsika zeAluminiyam ze-Anodised M5 Round Aluminium Standoff
I-hex inyathelo le-aluminium spacer standoff kit Yintoni i-standoff? IAluminium Standoff luhlobo lweenqanawa ezomeleleyo, ihlala isetyenziswa ngezikrelem.it zinemisonto kumacala omabini endlela, xa usikrola ngephepha, izinto ezintathu zinokwenza into epheleleyo (jonga umfanekiso ongezantsi) isetyenziswa ngokubanzi...
Ixabiso ngefektri enemibala ye-anodised Aluminium yamadoda amileyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume...
Ixabiso ngefektri enemibala ye-anodised Aluminium yamadoda ayimileyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume...
I-Aluminium yentsimbi ye-Stainless Brass I-Hex
Umbono weSpecial Precision Blue Anodised Aluminium M3 Inyathelo lendoda / elomfazi Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume...
Ixabiso elipheleleyo i-hex ityhubhu yenyathelo le-aluminium intambo yokuluka Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical,...
Ukuthengiswa okuShushu kweAlumum Anodised Hex Sign Support Inkxaso yeShishini Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical,...